Ukuphonswa kwamandla omhlaba - JJD MACHINERY CO., LTD.
I-Aluminium Gravity casting
I-JJD ingumkhiqizi wokuphonsa we-aluminium we-aluminium.
Umsebenzi wethu ukuhlinzeka nge-aluminium amandla adonsela phansi ngokujikijela ngekhwalithi ye-premium ngentengo yokuncintisana kanye nensizakalo eyengezwe ngexabiso kumakhasimende ethu. Imikhiqizo yethu yokudonsela phansi ye-aluminium idonsa ukuguquguquka okukhulu kuhlelo lokukhiqiza nokuthumela, olusenza sikwazi ukuhlangabezana kangcono nezimfuno zamakhasimende.
Imikhiqizo yethu yokuphonsela amandla we-aluminium adonswa embonini ebanzi, kufaka phakathi imboni yezimoto, izilawuli ezihamba ngogesi eziphezulu, izinsiza zezakhiwo, imishini yezemidlalo, ubunjiniyela bezemishini, njll. Lezi zingxenye zokuphonswa kwamandla kwe-aluminium zithunyelwa kakhulu eNyakatho Melika naseYurophu.
Ungashintsha ngokwezifiso izingxenye zakho zokuphonswa kwe-aluminium ngezinto zokwakha ezahlukile futhi uthumele ukwelashwa ngokwezidingo ezihlukile zomsebenzi. Ngokuyinhloko, wonke ama-alloys e-iron mold adonsela phansi ama-alloys ayatholakala ku-JJD. Siphinde futhi sinikeze izinsizakalo ezingezwe zenani njengezokwelapha zokushisa, zokwelapha ngaphandle (kufaka phakathi i-electroplating, i-powder coating, nokudweba), umhlangano, njll.